Rubric: Sport mabasa
iyo mhando yakadini iri mubhokisi reNewbies. Mutambi akabatwa muhomwe yemwedzi 3 haabvumirwi kupinda chero upi noupi mukukwikwidza. 3 kubuda. Zvakakosha kukunda hondo dzeCNUMX mugore rese kubva kune vatsva kusvika kumakwikwi ...
Ikoko kuChelyabinsk kune maitiro asingadhura maitiro, aerobics, fitness, + kukodzwa kwevadzidzi Studio yehutano uye dhani "Paradhiso" Ndinofara kukukoka kune studio itsva yekutamba uye fitness Paradhiso, iyo ichangobva kuvhurwa ...
Nzira yekuyera biceps sei? mumamiriro akasununguka? Ndinoda kutarisa kukura kwemakani. Chinhu chikuru ndechokuti nguva dzose dzienzane mune imwechete. Kazhinji kazhinji inogadziriswa munzvimbo yakasununguka. Asi nokuda kwekuita pa ...
nzira yekugadzirisa zvakare 2 kg kwezuva re1. Zvino ini ndinoda kudya izvo zvamunogona kudya? ikozvino ini ndichaenda pamusoro pemaminitsi 20 duaretiki kuti ndibatsire))) prosit prosrits Zvose mvura inobva mumuviri inobviswa. Usa ...
Icho chinyorwa chinobatsira kupomesa mberi here kana kuti inhema? Ndine dambudziko rimwechete, pfupa rakanyanyisa, asi ini handizivi kana kuti ndotora expander kana kwete? iyo wanda haizoputi, asi inonyanya kuipa ...
Chii uye sei kushambidza ski jacket ?? Hungu, hapana chikonzero chekushambidza jekete mumushandisi wekuchenesa Chii chisingafaniri kuitwa: Kushandisa kusashamba mbatya yekuchenesa kana kushambidza kunogona kuvhara pores; Kuwedzera bleach zvinokuvadza zvakanaka ...
Icho chinonzi 500 chikamu chinopera here? kana chete kusvika ku400? Sprint igadziriro yemitambo inorwisa apo vatambi vanoita nharo mu sprint (kukurumidza kufamba) munhandare. Kureba kwemarefu ...
Chii chinonzi glutamine uye nei ichidyiwa? Glutamine ndiyo inokosha yaminodi iyo iyo chikamu cheprotheni uye inofanirwa kuti ibudirire musimba kukura uye inotsigira maitiro ezvirunho ... Muchidimbu, vanodya simba rakawanda ...
Ichokwadi here kuti vatambi vane mwoyo unowedzera uye kuputika nekuda kweizvi zvishoma nezvishoma mumamiriro akadzikama? Hongu, vatambi vezvemhizha vane kuwedzera kwemoyo wekukura uye tachycardia, ichi ndicho ...
Vakafa uye kufa kwekufa chinhu chimwe chete kana kwete, chii chiri musiyano! Kune miviri miviri mikuru yekutsvaga: classic sumo. Chikoro chekare chinowanikwa nemakumbo makadzika (anenge ...
Kuti abvise dumbu, iyo simulators inofanira kuitei? Mimba yakasiyana: Rusvingo rwomukoma rwakashama, saka dumbu rinotanga kubva sternum. Nzira iri nyore yekugadzirisa nayo iyo yakawandisa yakawanda yemafuta (zvinokwanisika kunyange kana musuru ...
Nzira yekuti "yakaoma" nyaya yevatambi Chimwe chezvikanganiso, chichiri chimiro chevashandi vakawanda, chakanyanya kukurumidza kana kudarika zvakanyanya kuderedza kuderedza kudya. Imwe kukanganisa kudya kwakanyanyisa ...
Nzira yekutora sei press? Unyanzvi, kupemha, nezvimwewo. Kusimudza torsi pamhepo yekunze, kupera mukati. Unofanira kufema zvakanaka. Zviri nani kuti uite kudaro ... Simudza muviri musati majeko anotanga kusimuka uye achienda ...
Is ironman protini yakanaka here? whey Excellent protein. Ndinobvumirana naNikita, vazhinji vepurotini zvechokwadi vanokanganisa mudumbu, asi izvo zvakange zvakanaka kwandiri! Zvakare, iye uye pa ...
Mibvunzo ye101 mu database yakagadzirwa mu 0,615 masekondi.